Shina: Nifandrombahana ny nividy sira · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2011 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 한국어, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Sady manafintohina no mampahonena ireo fihetseham-po tao Shina taorian'ny horohorontany, tsunami sy ny loza nokleary tao Japana, mbola sarotra ny fahatsapan'ireo firenena ny zava-nitranga tao Japana .
Nanjary fanararaotana ho an'i Shina ny faharavana niseho tao Japana mba hilazany ny fikasany amin'ny hoavy. Niseho tamin'ny Alarobia hariva ny fiantraikan'ny horohorontany tany Japana raha nanambara ny haino aman-jery Shinoa fa tsy hisy ny taratra radio-actif manerana ny Shina fa ny tsaho no milaza fa ny ambin-tsira ao Shina dia mety ho tratran'ny taratra manimba manamorona ny morontsiraka Atsinanana.
Ny filazan'ny fampitam-baovaon'ny fanjakana tamin'ireo mpijery fahitalavitra mba tsy hanahy ny amin'izay mety hoavin'ny sira dia vao mainka niteraka ahiahy tamin'izy ireo, nanjary nitarika tahotra izany ka lasa nividy sira avokoa ny mponina tao amin'ny tanàna maro, ka nihamafy indray ny fiparitahan'ny tsaho. Io fihetsika, izay tsy mahatsikaiky mihitsy io dia, nampanjaka [zh] ny adihevitra tao amin'ny Weibo sy ny fitaovam-piseraserana sasany nandritra ny Alarobia alina, nanomboka nanaisotra ny tsaho mikasika ny sira isaky izay mipoitra tao amin'ny Tweet ny mpiasan'ny Weibo , izay mbola mety hiteraka horohoro. Mbola tsy nanambara ny tsaho momba ny sira ny kaonty ofisialin’ ny Weibo Shina ny misasak'alin'ny Alarobia.
Indreto Tweets vitsivitsy voarakitra:
Tao amin'ny toerana rehetra ao amin'ny farintanin'i Zhejiang androany nanomboka ny atoandro hatramin'ny hariva, nisy ny fifidianana sira tampoka noho ny tahotra niparitaka…tokony hisy olona hitsangana mba hilaza fa tsy marina ny tsaho mandeha.
Raiki-tahotra ireo mponina ao Silly ka nihazakazaka nividy sira, natahotra fa mety ho simban'ny taratra mpanimba ny sira ao an-dranomasina. Tiako mba hilamina ny vahoaka ka tsy hikoropaka hividy sira noho izany tsaho izany. Nalaiko tamin'ny 9:35 alina ity sary ity tao amin'ny magazay iray tao an-toerana ao Guangzhou.
Ireo olona raiki-tahotra ka mividy sira, manahy fa mety ho simban'ny taratra mpanimba ny sira rehetra androany. Ry vahoaka, milamìna saina ianareo, aza mino izany tsaho izany, aza manampy amin'ny fitombon’ ny tsaho sy ny korontana. Nalaina tamin'ny 9 ora alina ny sary tao amin'ny Xicun TrustMart ao Guangzhou, izay tapitra tao anatin'ny sekondra fohy ny talantalana misy ny sira.
ShanghaiJC: nandeha nitady sira aho tamin'ny 9 ora hariva, fa tsy nahita intsony. Tsy manana sira intsony i Shanghai. Sarin'ny tao amin'ny “Carrefour”, izay tsy nahitana intsony ireo marika 10 isan-karazany. Mampahonena.
Fihetsika “ny tahotra noho ny sira” tao Ningbo, . Lasa lavitra izao.
Mitàna magazay lehibe ny dadatoako any Shenzhen, niantso ahy izy fa efa tonga any Shenzhen koa ny tahotra amin'ny sira, amidiny 10 Yuans ny iray fonosana. Nilaza anay izay fa mbola misy sira ao an-tanàna. Vao nahare izany ireo fianakaviana dia nihazakazaka nividy sira 20 fonosana.
Raki-tahotra ny vahoaka eny rehetra eny ka nihazakazaka nividy sira. Tsy mba manonteny tena ve izy fa tsaho fotsiny izany? Fa nahoana ny tsirairay no mihevitra fa simba ny sira? Vao niantso ahy teo ny fianakaviako any am-banivohitra fa niakatra ho 18 Yuans ny vidin'ny iray fonosana, ka nitondra 10 boaty tany an-trano ny olona sasany. Nijanona tsy nivarotra sira intsony ny toeram-pivarotana aty. Andriamanitra ô….
Mpamaham-bolongana bitika mipetraka ao Wenzhou antsoina hoe thalorfield, ni-tweet indray tao amin'ny Kaonty Ofisialy ny Tranobe Iraisampirenena Shinoa misahana ny mpanolotena hanao vonjy voina (CIRRS):
Tahotra manerana ny faritra maro no miseho androany manodidina ny faritanin'i Zhejiang, mba hividy sira sy tsiron-tsakafo hafa, vokatry ny tsaho avokoa ny anton”izany, fa mety tsy hisy intsony ny sira noho ny taratra mpamono . Ireo izay mandinika tsara dia mahafantatra fa tsy avy any Hangzhou mivantana ny sira hohaninay!!! Mba hanajanonana izany tsaho izany, ataovy amin'ny tweet indray izao!! Azafady! —Ny tompon'andraikitra: Tsy naheno izahay fa tonga taty Shina ny taratra mpanimba tao Japana, nilaza ny vaovao fa araka ny tokony izy avokoa ny vokatry ny fanadihadiana natao!
Ary koa tao amin'ny kaontin'ny CIRRSt:
Tsy mikorapaka hividy sira ny olona ao Japana, koa nahoana isika no nanomboka izany? Lavi-davitra an'i Ningbo anefa i Japana, koa ajanony ny tsaho azafady. Avy any Qinghai ny sirantsika, ka tsy hisy ny tsy fisian'ny sira. Milatsàha an-tsitrapo mba hanampy amin'ny fijanonan'izany lainga izany. Misaotra.
Avy amin'ny fantsom-baovao ara-toekarena any Shina ity sary ity, izay manonona mpiserasera iray:
“Mividy sira ny mponina, ary efa nitombo avo roa heny sahady ny vidiny, tsy afaka mividy sira ianao ankehitriny na dia mila aza. Namany iray ao amin'ny fianakaviana no manana magazay lehibe iray ary vao avy nahazo sira efatra takelaka. Ary nody tao anatin'ny fotoana fohy izy ireo.” Nahita ny mpanao gazety fa tapitra ny sira any amin'ny ankamaroan'ny magazay lehibe ao Hangzhou.